Somaliland Oo Ka Hadashay Ahmiyadda Biyo-xidheenka Itoobiya Ugu Fadhiyo Mandaqadda | Salaan Media
Somaliland Oo Ka Hadashay Ahmiyadda Biyo-xidheenka Itoobiya Ugu Fadhiyo Mandaqadda
Adis Ababa (SM)- Dadka Somaliland waxay jecel yihiin in ay taageeraan dhismaha Mashruuc GERD ee biyo xidheenka dalka Ethiopia, waxaana ay fahamsan yihiin in mashruucani kordhinayo doorkooda dhaqaale ee gobolkan.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Mudane Xirsi Cali X. Xasan ayaa u sheegay wakaalada wararka Ethiopia ee loo soo gaabiyo WIC in ay dadka reer Somaliland ay mashruuca GERD ku taageereen in ka badan hal million oo dollar.
Wasiir Xirsi oo u waramayey WIC waxa kale oo uu sheegay in mashruucan GERD uu qayb weyn ka ciyaari doono horumarinta iyo xoojinta dhaqaale iyo bulsho ee dadka gobolkan oo dhan.
Waxa kale oo Xirsi intaa ku daray in dawladda Somaliland ay dhiiri gelinayso mashruucan, waxaana ay qabatay shirar iyo doodo lagaga hadlayo faa’iidada uu mashruucan ballaadhani horumar ahaan iyo dhaqaale ahaan u leeyahay gobolka.
Wasiirka madaxtooyadu waxay kale oo uu sheegay in ay isticmaali doonaan dabka mashruucaas biyo xidheenka laga sugayo, dal ahaanna waxay doonayaan in ay arrintaa wada xaajood kala galaan dawladda Ethiopia.
“ Dad Somaliland way sii wadayaan ka qayb qaadashadda mashruucaa, illaa inta ay dawladda Ethiopia soo afjarayso dhismaha biyo xidheenkan dabka laga dhalinayo”, ayuu ku soo xidhay hadalkiisa Wasiirka Madaxtooyadda Xirsi Cali Xaaji Xasan.
XIGASHO : WARGEYSKA DAWAN